11. Jan မှာ ပိုကောင်းတဲ့ Features တွေနဲ့ Note 11 Pro ICT.com.mm မှာ ရောက်ပါပြီ ~ The ICT.com.mm Blog
11. Jan မှာ ပိုကောင်းတဲ့ Features တွေနဲ့ Note 11 Pro ICT.com.mm မှာ ရောက်ပါပြီ
မျက်နှာပြင်ကြီးကြီး၊ Performance ကောင်းကောင်း စမတ်ဖုန်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Redmi Note စီးရီးထဲက Note 11 Pro မှာ ဘယ်လိုတွေတောင် မိုက်နေသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ကိုယ်ထည်နောက်ကျောကို Tempered Glass နဲ့ဆင်ပေးထားပြီးတော့ လုံးဝ Fresh ဖြစ်နေစေမယ့် အနက်၊ ခရမ်း၊ အစိမ်း၊ အပြာရောင်တို့နဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ #Awesome!
6.67″ မျက်နှာပြင်က Super AMOLED မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးတော့ Full HD + resolution နဲ့ Refresh rate – 120Hz ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ပိုင်းနဲ့ မျက်နှာပြင်ထိတွေ့မှုက အမိုက်စားပါပဲ။ #WOW!
Mediatek Dimensity 920 processor, Mali-G68 MC4 graphics, RAM 6GB နဲ့ Internal Storage 128GB တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ System ပိုင်းက Gamer တွေအကြိုက် ဂိမ်းအမြင့်တွေကိုတောင် ဂရပ်ဖစ်အမြင့်နဲ့ ကစားနိုင်စေမှာပါ။ OS အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် Android 11, MIUI 12.5 တို့နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ #COOL!
ပုံခပ်မိုက်မိုက်လေးတွေရိုက်ဖို့ 108MP (Main Camera), 8MP (120 Degree Wide Angle Camera)နဲ့ 2MP (Macro Camera) တို့ကို ကျောဘက်မှာဆင်ပေးထားပြီး Night Mode ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အသေးစိတ်ကြည်လင်မှုက အံ့မခန်းပါပဲ။ 4K Video ကို 30fps နဲ့အထိလည်း ရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Filter အလန်းတွေနဲ့ Features တွေစုံတဲ့ 16MP Selfie Camera က အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို အလှဆုံးသိမ်းဆည်းထားနိုင်စေမှာပါ။ #PERFECT!
5160mAh ရှိ ဘတ္ထရီက အချိန်အကြာကြီးအသုံးခံသလို 67W Fast Charging ပါလို့ မိနစ်လေးဆယ်အတွင်း ဖုန်းအားအပြည့် ပြန်သွင်းနိုင်မှာပါ။ #SURE!
ကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်နှာပြင်၊ အမိုက်စား Refresh Rate၊ ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ အားဝင်မြန်တဲ့ဘတ္ထရီ ဒီလို Feature တွေနဲ့ Redmi Note 11 Pro ကို ပေးထားတဲ့လင့်ခ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးကာလာလေးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။ #OK!!
Let’s Shop here » https://bit.ly/3FboKwV
#ShopICT #Myanmar #Electronics #1OnlineTechRetailer ##Xiaomi #note11pro
Newer PowerColor ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အမိုက်စား Gaming Graphics ကတ်တွေလိုချင်တယ်ဆို Pre Order လက်ခံနေပါပြီနော်။
Older Save up to $50 Acer Swift5and Spin 1, 3.